Fidel Castaro - Wikipedia
Maqaalkan wuxuu u baahan yahay dib-u-habayn; cadaymo iyo tixraac.
Fidel Kastaro (; ku dhawaaqa)(ku dhashay Biràn, 13 Agoosto 1926) waa siyaasi, hogaamiye iyo xeer-yaqaan u dhashay wadanka Kuuba. Wuxuu noqday Raiisul Wasaaraha dalka Kuuba, kadib markii uu ku riday xukuumadii Fulgencio Batista kacaan milatari.
Fidel castaro فيدل كاسترو
Magaciisa oo buuxa waa Fidel Alejandro Castro Ruz. Wuxuu dhashay sannadkii 1926-kii bishii sideedaad. Wuxuu ku dhasahy magaalada la yidhaa Las Manacas. Aabihii oo la odhan jiray Angel Castro wuxuu lahaa beer weyn oo laga beero aalaha amma sonkor khaanka( sugar cane) oo ahayd 23 kun oo Higtar. Fidel wuxuu ku dhasahay gobol sabool ah kamay jirin waxbarasho, adeeg caafimaad iyo mid shaqo. Laakiin Fidel wuxuu noqday shakhsi nasiib leh. Aabihii Angel Castro wuxuu ka soo tahriibay dalka isbayn sannadkii 1905-kii. Wax aqoon ahna muu lahayn. Xitaa magaciisa muu qori jirin. Laakiin dedaal badan ka dib wuxuu noqday nin hanti badan leh.
Fidel hooyadii waxa la la yidhaa Lina. Waxay walaalo yihiin toddoba caruur ah oo kala ah: Angela, Romon, Fidel, Juan, Raul, Emma iyo Augustina. Fidel waxa dugsiga lagu daray isagoo afar sanno jiray. Yaraantiisi wuxuu ahaa arday qalqaali ah, oo dagaal fara badan. Sannadkii 1942-kii ayuu galay dugsiga sare oo la yidhaa Jesuit school oo ku yaal caasimada kuuba ee Havana. Maadaama ku soo baraaray beeraley rabashad badan waxa loogu yeedhi arday jabhadeed. Wuxuu jaamacada ka baranayey sharciga. Sannadkii1945-kii oo ahayd wakhtigii uu jaamacada ku jiray wuxuu aad uga doodi jiray siyaasada. Sannadkii 1947-kii wuxuu ku biiray koox ka koobnayd 1200 oo hubaysan kuwaasi oo ku kacsanaa dalka Dominican. Laakiin markii dambe wuu ka baxay. Sannadkii 1948-kii wuxuu guursaday Mirta Balart, waxay ahayd ardayad dhigta Jaamacada Havana. Sannadkii 1949-kii waxa u dhashay ilmihii ugu horeeyey, oo loo bixiyey Fidelito. Sannadkii 1950-kii ayuu ka qalin jabiyey jaamacadii. Ka dib wuxuu bilaabay inuu taageero dadka masaakiinta ah ee dalka kuuba. Dawladii wakhtigaasi dalka ka talinaysay ayaa noqotay mid musuqmaasuq badan. Waxaana hogaamiye ka ahaa dalka m/weyne Batista. Fidel ayaa jeelka loo taxaabay. ? Sannadkii 1953-kii ayuu Fidel iyo 100 dagaalyahan weerareen magaallo ku taalla Kuuba, ka dib ciidankii kuuba ayaa cagta mariyey weerarkii lagu soo qaaday, Fidel Castro waa la qabtay. Jeelka ayaa loo taxaabay, waxaana loo mastaafuriyey dalka Mexico. ? Sannadkii 1955-kii ayuu dalka Mexico ka sameeyey koox kacaan ah. ? Sannadkii 1957-kii wuxuu soo qaaday weeraro ku-dhufo-ka dhaqaaq ah, oo uu kaga soo horjeeday m/weyne Batista. ? Sannadkii 1957-kii ayuu dalka Kuuba inqilaabay, waxaana la shaqaynayey koox saraakiil sare ah oo ciidamada ka tirsan. Wuxuu ahaa inqilaab aan dhiig ku daadan. ? Sannadkii 1960-kii ayuu Fidel Castro la kulmay m/meynihii midowga soofidka ee la odhan jiray Khrushchev. Intaasi ka dib wuxuu xidhiidh dhaw la yeeshay midowgii soofiyadka. Isla sannadaasi ayuu maraykanu cunoqabatayn ku soo rogay. ? Sannadkii 1961-kii ayuu Fidel si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu shuuciyada aaminsan yahay. ? Sannadihii 1965 ilaa 1979 Fidel wuxuu ku mashquulsanaa sidii uu shuuciyada ugu fidin lahaa dalal ka tirsan qaarada afrika. ? Sannadkii 1987-kii ayuu Fidel heshiis dhinaca socdaalka la saxeexday maraykanka.
Sannadkii 1998-kii qaramada midoobay ayaa cunaqabatayntii ka qaaday dalka kuuba. Sannadkii 2000 dalka kuuba wuxuu galay hoos-u-dhac dhaqaale, waxaanu Fidel Castro xidhiidh la yeeshay dalka Venezuelan, waxayna kala saxeexdeen heshiis dhinaca dhaqaalaha ah. Sannadkii 2004 ilaa 2006-dii ayuu dalka Venezuelan siiyey kuuba 53 kun iyo sagaashan foosto oo shidaal ah, taasi bedelkeeda kuuba ayaa bixisay afartan kun ilaa labaatan kun oo dawooyin caafimaad ah. Arrintani Fidel Castro waxay ka caawisay in warshadaha dalka u helo shidaal. Sannadkii 2006 ilaa 2008-dii ayuu Fidel Castro wareejiyey xilal badan oo u hayey. Sida M/weynaha golaha qaranka, guddoomiyaha golaha wasiirada, xoghayaha kowaad ee xisbiga shuuciga, taliyaha guud ee ciidanka, wuxuu ku wareejiyey walaalkii oo la yidha Raul Castro. Sababta ayaa lagu sheegay inuu xanuun weyni ka hayo caloosha iyo midhiqirka mana awoodi karo inuu xilalkan sii hayn karo. ? Dabayaaqadii 2008-kii ayuu Fidel Castro noqday hawlgab waxaanu ku jiraa dhakhtar lagu dawaynayo. ? Sannadkii 2010-kii ayey ahayd markii ugu horaysay ee muuqisa la arko Fidel Castro, isagoo laga waraysanayo Tilifiishan. ? Sannadkii 2011-kii ayuu si rasmi ah isaga casilay hogaamiyihii xisbiga shuuciga ee waxaana qabtay walaalkii Raul Castro. Shakhsiyada Fidel castro Fidel Castro waa nin dheer, qurx badan oo isku kalsoon. Wuxuu inta badan xidhaa suudh buluug ah. Waa in cadho badan, uma dulqaato wixii la soo darsa. Xitaa khaladka ugu yari. Wuxuu caan ku yahay dhaar iyo cadho wada socota. Waa nin leh laba sifo oo aad u kala fog, mar waa qof dhaqan fiican oo si heer sare ah dadka u qaabila, marna waa qof dabeecad qalafsan si aan caadi haboonayn dadka ula hadla. Waa qof u shaqeeya si aan caadi ahayn, markuu shaqo weyn hayo wuxuu shaqeeyaa afartan saacadood oo xidhiidh ah, wuxuu yara qaataa waxoogaa nasasho ah oo keliya.
Kadib wuxuu noqday Madaxweeynaha wadankaasi 2 Disembar 1976, wuxuuna heystay jagadaasi illaa 18 Febraayo 2008, markii uu xukunka uu dhiibay walaalkiisa Raùl Castro. castaro hada Siyaasadda wuu ka fiidhiistay kadib markii uu talada u dhiibay walaalkiis oo ah hada maamulaha ama hogaamiya wadanka kuuba, fidadl kastaro wuxuu ka mid yahay madaxada dhuunta u gashaya dalka maraykanka, wuxuuna mudo dheer diidanaa inuu wax ka badalo siyaasadiisa, shuucinada ahayad iyada oo uu xiligaas xulafo la ahaa midawgii Soofyeedka ee uu ruushku hormuudka u ahaa, wuxuuna lahaa askarta uugu badan ee calooshood u shaqayastayaasha ahaa waxaana lagu xasuusan karaa Castaro gacantii uu u fidiyay dalka Itoobiya oo ahaa dadl xidh xidhan, oo shuucinimo aan waxba dhaamin haduu isbadal kasta ka dhaco, xiligaas oo dalka dagaalku afeeyay ee soomaaliya ay ka qabsadeen Itoobioya Gobolda Ogaden oo ah dalka ay gumayastaan xiligaas oo ay u soo gurmadeen Itoobiya dalal fara badan oo ay ka mid ahaayeen Ruushka Cuba iyo Maraykanka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fidel_Castaro&oldid=162040"
Last edited on 6 Oktoobar 2016, at 03:37
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2016, marka ee eheed 03:37.